Masiibadii Dibigu Sababay!
Thursday 6th May 2021 10:58:40 in Aragtida Dadweynaha by Madaxa Wararka
Marar badan ayaad maqashaa habaarka " Qaladi samada kaaga soo dhcaday".
Laakiin akhriste dalka Brasil bishii feberweri sanadkii 2013 ayaa nin ka tirsan qoysaska saboolka ah oo lagu magacaabo Jao Maria de Souza oo gurigiisa hurda goor habeenimo ah uu samada kaga soo dhacay neef Sac aad u xog weyni.
Gurigiisa oo cariisha ahaa ayuu neefka Saca ahi dusha uga baxay iyadoo ilaa hadda aan la garan karayn sida uu koray inkasta oo loo malaynayo inuu ka fuulay kaabadda guriga dhiniciisa debedda ku taalay.
Waxaana la sheegay in markii uu dul maryay meel ku began sariirta uu ku hurday ninkani uu neefka Saca ah uu la soo go’ay saqafku , madaama uu ahaa neef aad u xoog weyn isla markaa uu ku fadhiistay Jao Maria.
Sida lagu daabacay bogga telegraph.co.uk, gabadhiisa ayaanay iyada waxyeelo soo gaadhin. Saca ayaa ka soo baxsaday xero xoolaad u dhowayd gurigiisa , waxaana uu culayskiisu dhamaa hal ton iyo badh ama 1500 Kg. Qoyskiisa ayaa ku dooday in aan shilkaasi la aqbali Karin oo ay tahay in la baadho. Mulkiilaha neefka Dibiga ah lahaa ayaa lagu qaaday kiiska ah dil aan u kas ahayn.
Masiibadii Bandooga - Taxanaha Soomaali waa walaalo, Q. 12aad
Tog-Wajaale: Ganacsatadii Hantidoodii ku waayey Masiibadii Dabka ma Ceelna Uma Qodna Ceelalyana uma Maqnaa !